မိမိကိုယ်ပိုင် - ယောက်ျားလေးများချစ်ခြင်းမေတ္တာ - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
ငါ့ကိုယ်ပိုင် ပျမ်းမျှ 4.9 /5ထဲက 11
N / A, 21.2K အမြင်များရှိသည်
Shounen Ai, နေပြည်တော်
Genius စားဖိုမှူးနှင့်စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင် Heemin သည်သူတစ်ပါးကိုမှီခိုအားထားခြင်းကိုမုန်းတီးသဖြင့်သူက“ Mr. ကိုယ်အလိုအလျောက်။ သူဟာဘယ်သူ့ကိုမှသူရဲ့အဓိကအစိတ်အပိုင်းကိုဖုံးကွယ်ထားရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် မှလွဲ၍ သူမသည်ပန်းချီကားတစ်ချပ်ဟုလူသိများသောသူသည်တန်ဖိုးထားနိုင်သည့်လူတစ်ယောက်ဟုလူသိများသောကြောင့်အလုပ်ခွင်၌ကောင်းသောအရာရှိသည်။ သူသည် K-pop အဖွဲ့၏ပရိတ်သတ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု! တိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုရင် Heemin ဟာ Jeong-woon ကိုစွဲလမ်းနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်တခြားအသင်းဝင် Yiyeon တစ်ယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူကသူ့ကိုစကားဆက်ပြောနေတယ်။ Heemin ရဲ့နှလုံးထဲမှာနောက်ထပ်နံပါတ်တစ်နေရာမရှိဘူးလား? ဒါမှမဟုတ်မရှိဘူးလား။
အခန်းကြီး 38 မေလ 4, 2021
အခန်းကြီး 37 မေလ 4, 2021
အခန်းကြီး 36 မေလ 4, 2021
အခန်းကြီး 35 မေလ 4, 2021
အခန်းကြီး 34 မေလ 4, 2021
အခန်းကြီး 33 မေလ 4, 2021
အခန်းကြီး 32 ဧပြီလ 21, 2021
အခန်းကြီး 31 ဧပြီလ 21, 2021
အခန်းကြီး 30 ဧပြီလ 21, 2021
အခန်းကြီး 28 ဧပြီလ 21, 2021
အခန်းကြီး 27 ဧပြီလ 21, 2021
အခန်းကြီး 26 ဧပြီလ 21, 2021
အခန်းကြီး 25 ဧပြီလ 21, 2021
အခန်းကြီး 24 ဧပြီလ 21, 2021
အခန်းကြီး 23 ဧပြီလ 21, 2021
အခန်းကြီး 22 ဧပြီလ 21, 2021
အခန်းကြီး 21 ဧပြီလ 21, 2021
အခန်းကြီး 20 ဧပြီလ 21, 2021
အခန်းကြီး 19 ဧပြီလ 21, 2021
အခန်းကြီး 18 ဒီဇင်ဘာလတွင် 10, 2020
အခန်းကြီး 17 ဒီဇင်ဘာလတွင် 10, 2020
အခန်းကြီး 16 ဒီဇင်ဘာလတွင် 10, 2020
အခန်းကြီး 15 ဒီဇင်ဘာလတွင် 10, 2020
အခန်းကြီး 14 ဒီဇင်ဘာလတွင် 10, 2020
အခန်းကြီး 13 ဒီဇင်ဘာလတွင် 10, 2020
အခန်းကြီး 12 ဒီဇင်ဘာလတွင် 5, 2020
အခန်းကြီး 11 ဒီဇင်ဘာလတွင် 5, 2020
အခန်းကြီး 10 ဒီဇင်ဘာလတွင် 5, 2020
အခန်းကြီး6နိုဝင်ဘာလ 30, 2020
အခန်းကြီး5နိုဝင်ဘာလ 30, 2020
အခန်းကြီး4နိုဝင်ဘာလ 30, 2020
အောက်တိုဘာလ 29, 2020